Ogaden News Agency (ONA) – Faah faahintii Daggaalkii Gobolka Jarar ka dhacay Shalayto 26 June 2015
Faah faahintii Daggaalkii Gobolka Jarar ka dhacay Shalayto 26 June 2015
Iska hor imaadyada dhex maraya ciidamada gumeysiga iyo Naftood Hurayaasha Ciidamada JWXO ee u taagan xoreynta Dhulkooda iyo ilaalinta sharafta Diinta islaamka iyo Shacabka Ogadeniya ayaa sii badanaya bisha Barakaysan ee Ramadaan. Daggaaladan ay Halyeeyada JWXO la beegsanayaan Ciidanka gumeysiga ayaa sababay Khasaare naf iyo maalba leh kaas oo burburiyay ciidamada Woyaanaha.
Deegaanka Towlane oo kamida degmada dhegaxbuur ee Gobolka Jarar waxaa lagu haleelay ciidamo kamida kuwa gumeysiga Ethiopia. Halkaasi oo weerarka ay lahaayeen ciidanka JWXO oo ka warhelay ciidamada gumeysiga oo halkaas ku sugnaa.
Daggaalkan oo dhacay Shalayto 26 June 2015 waxaa halkaas cagta lagu mariyay ciidankii gumeysiga. Waxaana Wakaalada ONA soo gaadhay in goobtaas lagu dilay 10 Askari halka lagaga dhaawacay 15 kale oo kamida Ciidamada Woyanaha.
Daggaalkan oo khasaare aad u badan u geystay Ciidamada Gumeysiga Ethiopia waxaa laga dareemay Magaalada Dhegaxbuur oo Ciidamada Woyanuhu dhawaacooda ula baqeen.